झारफुकका नाममा तातो पन्युँले हान्दा एकको मृत्यु, दुई घाइते ! « MNTVONLINE.COM
झारफुकका नाममा तातो पन्युँले हान्दा एकको मृत्यु, दुई घाइते !
टिचिङ अस्पतालका डाक्टरमाथि कुटपिट, एक जना पक्राउ !
एटिएम मेसिन फुटाउँदै गरेको अवस्थामा दाजुभाइ पक्राउ
सेवाग्राहीबाट घुस लिने विद्युत् प्राधिरकणका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा !
सेनाको टोलीद्धारा गैंडाको खाग तस्करीका नाइके पक्राउ !
बैतडीमा एक किशोरी सामूहिक बलात्कृत !